ISILO ESIMANGALISAYO 3 UMHLA WOKUKHUTSHWA: YINTONI ESINOKUYILINDELA? - IIMUVI
Isilo esimangalisayo 3 Umhla wokuKhutshwa: Yintoni esinokuyilindela?
Umhlaba weJK Rowling awusoze usilele ukusonwabisa xa izinto ziphantsi. Iimpawu ezimangalisayo ze-3 ukufakwa kwesithathu
Umhlaba weJK Rowling awusoze usilele ukusonwabisa xa izinto ziphantsi. Amarhamncwa amnandi 3 ukufakelwa okwesithathu kuthotho lweenqwelomoya oluneenxalenye ezintlanu ezisekwe kwi-prequel kaJK Rowling kwiHarry Potter franchise, Izilwanyana eziMangalisayo kunye nalapho uzifumana khona. Ukuza kuthi ga ngoku, sele kukhutshiwe iimovie ezimbini, kwaye eyesithathu isetelwe ukukhutshwa.
Cwangcisa amashumi amathandathu eminyaka ngaphambi kokuba kuzalwe iNkwenkwana ebiphila, imovie yokuqala ijikeleze iinzame zikaNewton Scamander, iMagizoologist ebekekileyo kunye nombhali onomdla, njengoko efuna ukufumana izidalwa eziyimilingo eziyingozi ezazikhululwe ngokungazi kwityesi yakhe No-Maj (Muggle) ogama linguJacob Kowalski, esixekweni. Isethwe eNew York ngo-1926, kwaye iyonke imovie ibonwa iintsuku ezimbini.
Imuvi yesibini, Amarhamncwa amnandi: Izenzo zolwaphulo-mthetho zaseGrindelwald, zijolise kwelona gunya lomnyama elinamandla ngelo xesha, uGellert Grindelwald, njengoko esakha umkhosi onamandla oya kwisizathu sakhe esibi sokulawula zonke izidalwa ezingezizo ezomlingo kunye nokufundisa oosiyazi phezulu. Nangona kunjalo, ngu-Albus Dumbledore kuphela, owayesakuba ngumhlobo osenyongweni kunye nomthandi onokumisa uGrindelwald. I-Dumbledore ifuna uncedo oluvela ku-Newt Scamander, kanye xa wayengumfundi kunye nehlakani elinempembelelo.
Sekuyiminyaka ephantse ibe yimine ukusukela ukuba imovie yesibini, iCrimes Of Grindelwald, ikhutshwe ngonyaka we-2018. Ngelishwa, yagxekwa kakhulu ngabo bobabini abalandeli nabagxeki kwaye yayiyeyona bhanyabhanya inezinga eliphantsi eHarry Potter Universe. Nangona kunjalo, uWarner Bros unembuyekezo enkulu kumdlalo bhanyabhanya omtsha, kwaye ngethemba, asinakuphinda siphoxeke kwakhona.
Umhla wokuKhutshwa ngokusemthethweni
Emva kokulibaziseka ngenxa yobhubhane wehlabathi kunye neengxabano, umhla wokukhutshwa kwamarhamncwa amnandi 3 ubhengeziwe ukuba uza kuba nguJulayi 15, 2022. Kuxeliwe ukuba amarhamncwa amnandi 3 athabathe ixesha elininzi kuba ayakuba mkhulu kuneyokuqala Iimuvi ezimbini zidityanisiwe kwaye zineempendulo ezichanekileyo nezingcono kunye noRowling kunye noSteve Cloves abasebenza njengababhali abaziintloko. Nangona kunjalo, isihloko esichazayo asikenziwa esidlangalaleni.Sijonge phambili ekuboneni umhlathi ohlisa umhlathi osinika ukucaca ngakumbi malunga nomdlalo bhanyabhanya wesithathu onomdla.
Umxholo webali olindelekileyo
Umboniso bhanya-bhanya wesithathu uza kubanjelwa eBrazil ngo-1939, iminyaka ethile phambi kweMfazwe yesibini (II). Iyakuba yiminyaka eli-12 emva kwemboniso-bhanyabhanya yesibini, iCrimes Of Grindelwald, kwaye izakubonisa uGrindelwald noDumbledore, abalinganayo, apho eyokuqala yoyiswayo. Umboniso bhanyabhanya omtsha uza kuthatha apho iphelileyo iphelileyo, njengoko uGrindelwald ekwazi ukuqokelela iqela elikhulu lezizathu zakhe. Esinye sezidalwa ezinomlingo zikaNewt, uNiffler, weba isivumelwano segazi phakathi kweDumbledore kunye neGrindelwald, kwaye ngokunokwenzeka siya kuqaphela uNew kunye nabahlobo bekhangela into ebiweyo eya kuthi icothise iDumbledore ukuya kuDelind Grindelwald. Imfazwe yeHlabathi, uHitler, kunye namaNazi nawo aya kuthi enxulumene ngandlela thile kwaye anike uluhlu oluntsonkothileyo ebalini.
Abalingisi abalindelekileyo kunye nabalinganiswa
Ngelishwa, uJohnny Depp wacelwa ukuba aphume kwindima kaGellert Grindelwald emva kokuphulukana netyala enkundleni ye-UK Newspaper. Okwangoku, uMads Mikkelsen onesiphiwo esigqibeleleyo sikaHannibal ugqityiwe ukuba athathe indawo yakhe. Ngenxa yoko, silindele ukubona abalinganiswa bokuqala beemovie ezimbini bephinda indima yabo kwakhona, uEddie Redmayne njengoNewt Scamander, uKatherine Waterston njengoTina Goldstein, uDan Fogler njengoJacob Kowalski, uAlison Sudol njengoQueenie Goldstein, uCallum Turner njengoLesus Umkhonyovu.
UJude Law uya kuqhubeka nokunika ubomi ku-Albus Dumbledore omncinci, uEzra Miller uzokulwa njengoCredence Barebone, kunye noClaudia Kim abuye njengoNagini. UJK Rowling unemincili kakhulu kuJessica Williams, owadlala uNjingalwazi uLally njengoko umlinganiswa eya kuba nokubaluleka okuphambili, kwaye ubuqaqawuli bakhe bokwenyani buya kutyhilwa.
I-75 yeNkqantosi yeNkosana yeXesha lesi-4 iTrailer evuzayo, iSamente, iplani kwaye yeyiphi indawo ebangela umdla enokubonwa?
Indawo elungileyo yeXesha le-4 yesi-10 Umhla wokuKhutshwa, amahemuhemu malunga nesiQendu sokugqibela seNBC Show
Nantsi indlela yokuFumana iDyarm Sidearm kwiDashiny 2 Ixesha lokusa
U-Helena Bergström wenza uMlingo kwiScreen, kwakhona
Ukuhlaselwa kweTitan yeXesha lesi-4 Singalindela nini ukuba neMiboniso kwiZikrini? Zithini iinkcukacha zePloti?
ezona ziqendu zomntu wosapho zibukele phezulu
inyathelo kunye nomdlalo bhanyabhanya
ixesha lokugqibela lokufa elifileyo lokugqibela isiqendu 4 sokukhutshwa komhla
Umyalelo weemovie ezimbi zomhlali
I-orville tv show yabalingisi